Momba anay - Jinan Power Rubber Roller Equipment Co., Ltd.
Ny fitaovan'ny roller vaovao vita amin'ny fingotra dia manome sehatra tsara ho an'ny famokarana manan-tsaina. Ny fifandraisana misy eo amin'ny mpitantana ny famokarana sy ny mpandraharaha eny an-tsaha, ny fizarana angon-drakitra, ny firaketana ary ny fanaraha-maso dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny sehatry ny fiasan'ny fitaovana, mamorona fepetra tsara amin'ny fifehezana isan-karazany amin'ny famokarana.
Ny orinasanay dia mamatsy mpanamboatra roller fingotra miaraka amin'ny fitaovana tena marina, mateza ary mamokatra. Ny vokatra lehibe ao anatin'izany: Milina fanosotra fingotra, masinina fikosoham-bary / fikosoham-baravarana, fantsom-pako fanaovan-tsolika, fantsom-panafom-pako, fantsom-panafom-pantsaka, fantsom-pandrefesana fandrefesana, sns.
Tamin'ny taona 2000, ny vokatray dia nandalo ny fizahana nataon'ny CCIB Quality Certification Center mifanaraka amin'ny fenitra ISO 9001. Amin'ny fampiasana ny fitaovantsika, hampitombo ny fahombiazan'ny fanodinana ianao ary hampiakatra ny kalitaon'ny vokatra. Izy io koa dia mety hitondra tombony ara-toekarena be.